Mepụta Gburugburu Mobile na WPtouch Pro | Martech Zone
Mepụta Gburugburu Mobile na WPtouch Pro
Monday, August 1, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Jenn Lisak Golding
N'ime ụwa na-eme ngwa ngwa, ọ dị mkpa na saịtị gị kachasị na ngwaọrụ mkpanaka niile, gụnyere ekwentị na mbadamba. Dabere na nso nso a infographic emepụta Mkpado Microsoft, mobile internet ojiji ga-ewe desktọọpụ ojiji site na afọ 2014. Baghị uru ikwu, gị mobile saịtị bụ otu n'ime gị isi ahịa akụ na ụwa taa.
WPtouch Pro bụ ihe mgbakwunye WordPress nke na - enye gị ohere ịmepụta ma kwado isiokwu mkpanaka bara ụba maka saịtị gị. Ihe mgbakwunye ahụ na-enye usoro ebe ị nwere ike ịmepụta isiokwu ahaziri iche nke dị iche na saịtị kachasị maka desktọọpụ. O nwekwara ikike ịrụ ọrụ na plugins ndị ọzọ ma jiri ọtụtụ atụmatụ WordPress.
WPtouch Pro na-akwado isiokwu maka iPhones, iPads, Android, Palm OS, Blackberry, na Samsung, nwere atụmatụ dị ka menu zuru oke, mgbasa ozi na ọnụ ọgụgụ. Anyị enweelarị mmụba na nleta mkpanaka anyị kemgbe anyị mejuputara WPtouch Pro - onye na-achọghị nke ahụ?
Tags: Vidio Ahịa
Ewu ewu nke Asụsụ Mmemme
The Mobile Ọrụ